Daawo Sawirka Maxamed Xasan Xersi oo lagu helay Dambi ah in uu ku biiri rabay Al-Shabaab.
Maxkamad kutaala Dalka Canada ayaa dambi ah in uu ku biiri rabay Dagaalyahada hubeesan ee Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ku heshay Wiil Soomaali ah oo heesta dhalashada Dalkaasi .
Maxamed Xasan Xersi oo 28 sano jir ayaa Maxkamad lasoo taagay, waxaana lagu helay dambi ah in uu qorsheenayay in uu ku biro Kooxda Al-Shabaab , waxaana ninkan lagu qabtay bishii March 2011 garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto xili uu halkaasi ka dhoofayay.
Sida ay sheegeen Xeerbeegtida ninkan dacwada kusoo oogeysay Maxamed ayaa doonayay in uu u dhoofo Magaalada Qaahira ee Dalka Masar, si uu halkaasi uga sii gudbo una aado Soomaaliya uuna qeyb ka noqdo Dagaalyahanada Al-Shabaab ..
Wiilkan Soomaaliga ah ayaa maxkamada horteeda la keenay muddo seddex jeer ah si su’aalo loo weydiiyo , waxaana ugu dambeyn la sheegay in Maxamed uu doonayay in uu ku biiro Urur argagaxiso oo Soomaaliya ka dagaalama.
Maxamed Xasan Xersi oo ka mid ahaa ciidamada ilaalada amaanka dhisme ku yaala magalada Toronto ee dalka Canada ayaa sidoo kale lagu helay inuu shaqsiyaad kale ku dhiiro gelinayay inay ku biiraan Alshabaab.
Qoyska Maxamed Xirsi ayaa sheegay in dambi uusan laheyn wiilkooda qoorta loo galiyay ,qaabka Maxkamadu u dhacdayna ay tahay mid cadaalad daro ah , waxa ayna sheegeen in ay arintan ka qaadan doonaan racfaan.
Xog badan oo aadan ogeyn oo laga helay Shirka Dooloow ka socda.
Wararka ka imaanaya degmada Doolow ee gobalka Gedo ayaa ku warramaya in maanta uu shir-weynaha nabadeed ee gobalka Gedo halkaa ka furmi doono kadib markii shalay ay ahayd Jimco.
Shir-weynaha xooggiisa waxaa diiradda lagu saarayaa sidii dhinacyada walaalaha ah eek u dagaalamay degmada Baladxaawo ee gobalka Gedo.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka KMG ee Jubba GEN. Fartaag ayaa ka qeyb galaya kulamadani ka soconaya Doolow waxaana uu sheegay in goor dhow ay soo gebagebeyn doonaan wada hadalka dhinacyada gobalka Gedo uga socda degmada Doolow.
Guddoomiye xigeenka gobalka Gedo Cabdi Barre Cabdi ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadku ay wax isla meel dhigaan.
Sheekh Aw-libaax oo kamid ah saraakiisha ugu sarreysa Ahlu Sunna Waljamaaca ee Gedo iyo guddoomiyaha gobalka Maxamed Cabdi Kaliil ayaa madasha shirkaasi joogin inkastoo Kaliil u tilmaamay inuu taageersan yahay qaabka uu shirka u soconayo.
BEESHA caalamka oo XASAN cadaadis saartay una sheegtay in R/W C/Weli…
Warar laga helay xarunta madaxtooyada Soomaaliya, ayaa muujinaya in uu jirro cadaadis beesha caalamka ay saareyso madaxweyne Xasan Sheekh Maxammuud kaasoo ku aadan in uu joojiyo khilaafka kala dhexeeya isaga iyo ra’iisal wasaaraha kaasoo salka ku haya soo xulista wasiiradda cusub ee la rabo in xukuumadda ay ku dhawaaqdo.
Ra’iisal wasaaraha ayaa damacsan in uu isku shaandheen ku sameeyo golaha xukuumadiisa, waxaana uu doonayaa in uu meesha ka saaro xubno wasiiro ah oo ku dhowdhow madaxweynaha, balse arrintaas waxaa diiddan madaxweynaha oo raba in ay sii joogaan wasiiradaas.
Khilaafkaas wuxuu si xooli ah u soo baxay wixii ka dambeeyay markii uu dhacay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday xarunta baarlamaanka isla markaana daqiiqado kaddib uu is casilay wasiirkii ammaanka qaranka.
Haddaba beesha caalamka ayaa arrintan ku dhex jirta waxaana ay doonayaan in la qaboojiyo xiisadda ka dhex taagan labada mas’uul ee dalka ugu sareeya.
Golaha ammaanka Qaramada Midoobay ayaa dhawaan muddo hal sanno ah ugu kordhiyay shaqada xafiiska UNSOM, waxaana goluhu uu sheegay in dowladda Soomaaliya laga doonayo in ay la timaado wax qabad oo ay madaxda joojiyaan is qabqabsiga ka dhex aloosan si 2016-ka dalka uga dhacdo afti dadweyne.
Ma cadda cidda tanaasul muujin doonta iyadoo dowlada waqtigeeda uu uga harsan yahay labo sanno isla markaana shaqooyinka hor yaalla ay badan yihiin, balse caalamka ayaa doonaya in Cabdi Weli loo madaxbaneeyo shaqadiisa.
Ma ahan wax cusub in ay is qabqabsadaan madaxda dowladda oo waxaa sidaas ku baxay ra’iisal wasaarihii horre Saacid markii ay is qabteen madaxweynaha mooshin looga qaaday xukunka.
Puntland wey baryootameysaa!!!
DAAWO SAWIRADA:- Weerarkii Ismiidaaminta ee xalay ka dhacay Muqdisho
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax gaari loo adeegsaday oo xalaka dhacay afaafka hore ee Hotelka City Plaza ee Degmada Cabdi Casiis ,xili ay hoteelkaasi ku shirsanaayeen Saraakiil katirsan Ciidanka Dowlada iyo Xildhibaano.
Qaraxa ayaa ahaa mid gaari laga soo buuxiyay waxaana la dhigay afaafka hore ee Hotelka City Place , goob joogayaal ayaa ku waramay in qaraxu dhacay markii uu soo hamaaday shir ay Hoteelkaasi ku lahaayeen Saraakiil katirsan Laamaha Amaanka iyo Xildhibaano katirsan Dowlada.
Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay Qaraxaaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay labo kale , qaraxa kadib ayaa ciidankii Dowlada iyo ilaaladii kusugneed Hotelka waxa ay fureen rasaas aad u xoogan oo cabsi ku beertay dadkii hotelka ku jiray iyo kuwa ka agdhawaa.
Afhayeenka Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in Ciidanka Dowlada ay fashiliyeen qaraxaasi , waxa uuna tilmaamay in uu dhacay xili uu Hotelka Shir ugu soo dhamaaday Saraakiil iyo Masuuliyiin katirsan Dowlada.
Qaraxii xalay ka dhacay Hotelka City Place ayaa imaanaya xili wali aad looga hadal hayo Magaalada Muqdisho weerarkii todobaadkii hore xubno katirsan Al-Shabaab ku galeen Xarunta Golaha Shacabka xli halkaasi uu shir uga socday Xildhibaanada Baarlamaanka.
Dowlada Soomaaliya oo Faahin ka bixisay Qaraxii uu ka badbaaday Bashiir Goobe.
Iyadoo xalay uu Qarax ka dhacay Agagaarka Hotel City Place ee Degmada C/Casiis ayaa Taliska Booliska Soomaaliyeed waxa uu faah faahin ka bixiyay Qaraxaasi.
Qaasim Axmed Rooble Afhayeenka Baliiska Soomaaliya oo la hadlay Idaacada VOA Laanteeda Afka Soomaaliga ku hadasha ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ka Dhashay Qaraxaasi waxa uuna Sheegay in Qaraxaasi ay Fashiliyeen Ciidanka Booliska Soomaaliya.
Afhayeenka Baliiska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble Ayaa Sidoo kale Sheegay in ay wax ka qabanaya oo ay ka hortagaya Qaraxyada iyo Weerarada inta badan ka dhaca Magaalada Muqdisho.
Ma jirto cid si tasmi ah u Sheegatay Masuuliyada Qaraxaasi Ururka Al-shabaab oo dagaal kula jiro Dowlada Soomaaliya iyo Dowladaha Daneeya Arrimaha Soomaaliya ayaanan ka hadlin Qaraxi xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Taliyaha Hay’ada Nabadsugida Qaranka oo ka Bad-baaday Qaraxii xalay ka dhacay agagaarka City Palace.
Warar Dheeraad ah ayaa kasoo baxaayo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo ku qarxay meel ku dhaw Hotelka City Palace ee Magaalada Muqdishu.
Inta la xaqiijiyay labo ruux ayaa ku dhimatay qaraxa gaariga halka tiro kale ay ku haawacmeen, sida ay Shabakadani u xaqiijiyeen goob joogayaal goobta ku sugnaa.
Qaraxa ayaa dhacay kadib markii uu daqiiqado ka hor ka baxay Taliyaha Hey’ada Nabad sugida Qaranka Bashiir Goobe, waxa uuna marayay KM-0.
Gaadiidka gurma deg dega ayaaa goobta gaaray qaraxa kadib iyagoo goobta ka qaaday tiro dhaawacyo ah.
Xog: Xasan iyo Cabdi Weli oo mooshin iska kala diyaarinaya iyo lacag caqli ka bax oo codkiiba lagu kala iibsanayo.
Warar cusub oo la helay , ayaa sheegaya in ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Weli Sheekh Axmed uu si toos ah ugu biiray olole ay wadaan xildhibaanno diidan madaxweynaha oo doonaya in xilka laga qaado.
“Dagaalka labada mas’uul ayaa hadda u muuqda mid isugu soo biya shuban doono cidii lacag badisaa, islamarkaana heshaa xildhibaannada ugu badan” ayuu xildhibaan xog-ogaal ah sheegaye.
Illo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Madaxtooyada Somalia, ayaa Jornalizem u xaqiijiyay in Wasiirka Dastuurka Faarax Sheekh C/qaadir loo xil-saaray inuu soo iqtiraaxo ruuxa laga dhigi doono Wasiirka Amniga Qaranka ee lagu buuxin-doono Booska uu faarujiyay Gulled.
Guddoomiyaha degmada Garbahaarrey oo DFS ugu baaqay inay usoo gurmato Barakacayaasha kunool Degmadaasi.
Maamulka dowlada ee degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo ayaa markale walaac ka muujiyey xaaladda barakacayaasha ku nool xeryaha ku yaallo degmada Garbahaarey iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka Gedo.
Iimaan Caddow, Guddoomiyaha degmada Garbahaarrey ayaa sheegay in dadka ku nool xeryahaasi ay kujiraan xaalad nololeed oo adag ayna haysan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida raashiin, iyo biyo nadiif ah.
Dadkan oo intooda badan kasoo barakacay degmada Buur-dhuubo iyo deegaanno ku dhow-dhow ayuu sheegay gudoomiyaha ineysan helin gurmad ama gargaar muddooyinkaan, maamulka Garbahaareyna uusan awood u laheyn in gargaar u fidiyo.
Guddoomiyaha degmada Garbahaarrey ayaa dowlada iyo hay’adaha gargaarka kacodsaday in ay u gurmadaan dadkaas.
Dad badan ayaa kusoo barakacay degmada Garbahaarey kuwasoo kasoo qaxay dagaalada u dhexeeya ciidamada dowlada iyo xoogaga Al-shabaab.
Dhalinyaro Soomaali ah oo falal ay kamid tahay faraxumeyn ugu xirnaa Malta oo xabsiyada laga siidaayay.
Wararka naga soo gaarayo Malta, ayaa sheegaya in Halkaasi lagu hayo Maxaabiis badan oo u dhashay Dalka Somalia.
Maxaabiista ayaa waxaa kamid ah dhalinyaro lagu kala magacaabo Omar Osman iyo Anwar Osman Hassan, waxaana la sheegayaa in dhalintaasi la qabtay.
Xariga dhalinyaradaasi ayaa waxaa kasoo baxaayo warar kala duwan, wararka qaar ayaa sheegaya inay xiran yihiin weli dhalintaasi, halka wararka qaarna ay sheegayaan in lagu waayay wax dambi ah islamarkaasina lasiiyay min450 lacagta Euro ah.
Labada Dhibane, waxaa sannadkii 2007-dii la soo taagay Maxkamad, kadib, markii ay haweeney u dhalatay dalka Malta ku soo oogtay inay afar nin ku kufsadeen Xarunta Qaxootiga ee The Marsa Open Center waaberigii hore ee bishii March 19-dii ee sannadkii 2007-dii.
Sidoo kale, waxaa isla malta ku xiran dhalinyaro kale oo iyaguna ku eedeysan falal kala duwan gaar ahaan Kufsi iyo dhac, waxaana weli go’aan rasmi ah arrintaasi ka gaarin Maxkamada.
Lama Oga sida ay maxkamadu ka yeeli doonto dhalintaasi maadama ay iminka cafis iyo lacago ay isugu dartay Labo kamid aheyd Maxaabiistaasi
Al-shabaab oo qaab cajiib ah looga soo bad baadiyay 30 qof oo ay Afduubteen.
Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay in la soo badbaadiyay 30 qof ooa y afduubteen kooxda Al-Shabaab Al-Qaacida.
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika Soomaaliya, Maxamed Saalax Annadiif ayaa qoraal uu soo saaray oo loou talagalay saxaafadda ku sheegay in la soo badbaadiyay 30 qof oo qaad ka dajiyay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo.
Wuxuu sheegay xog ay heleen ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka KMG ah ee Jubba in ay u suurtagalisay in dadkaas ay soo badbaadiyeen.
Wuxuu sheegay in dadkaas loo sii waday magaalada Jilib ee gobalka Jubbada Dhexe.
Wuxuu sheegay oo kale in dadkaan iyagoo bad qaba ay hadda ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada Hoose.
Inta badan qaadka la geeyo Kismaayo ayaa lagu qaadaa diyaarad oo dhulka lama marsiiyo maadama deeganno badan oo Jubbooyinka ay gacanta ku hayaan Shabaab.
Maleeshiyo Beeleed ku dagaalamay Degmada Matabaan oo la heshiisiiyay.
Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye “Cirfo” oo Warbaahinta kula hadlay Gudaha Degmada degmada Dhuusamareeb ayaa sheegay in kan maamul ahaan, iyaga oo kaashanaya odoyaasha dhaqanka ee ku nool degmooyinka Dhuusamareeb Guriveel iyo Matabaan ee Gobollada Galgaduud iyo Hiiraan ay ku guuleysteen iney Xaliyeen khilaafka u dhexeeyay maleeshiyo beeleedyo halkaasi ku dagaalamay.
Waxa uu Sheegay in la sii wadi doono kulamada lagu Heshiisinaayo Beelahaasi.Waxa uuna intaasi ku daray in degmada ay ka saareen dhinacyadii ku dagaallamay.
Gobollada Dalkeena Soomaaliya waxa Inta badan ka dhaca Dagaalo u dhaxeeya Maleeshiyo Beeleedyo kaasi oo soo noqnoqda.
Wasiir ka tirsan Somaliland oo bixiyey sir xasaasi ah (Wasiiro Al-Shabab xiriir la leh oo ku jira xukuumadda)
Cabdullaahi Abokor Cismaan,oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa xabsiga la dhigey,kaddib markii uu sheegay inay jiraan wasiirro xukuumadda Soomaaliland ka tirsan oo Al-Shabaab ah,waxuuna cadeeyey inay isticmaalam magacyo kala duwan.
Ciidamada ammaanka Soomaaliland ayaa weerar ku qaadey aqalka uu Hargeyso ka daganyahay wasiir ku-xigeenkii hore,kaaso ku yaalla xaafadda 26-Jun waxaana halka ka dhacey isku dhac muddo kooban socdey.
Rasaas xog-leh ayaa laga maqley guri uu daganaa Cabdullaahi Abokor ,waxaana gudaha u galey aqalkiisa ciidamada ammaanka oo la soo baxey,waxaana isku dhaca ka dhashey dhaawaca mid ka mid ah ilaaladiisa.
Cabdullahi Abokar Cusmaan
Xilligaan waxaa la sheegay wasiir ku-xigeenkii amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha inuu ku jira xabsi ku yaalla magaalada Hargeysa,mana jirto wax hadal ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka Soomaaliland.
Dhinaca kale,waxaa la adkeeyey amniga magaalada caasumada u ah maamulka Soomaaliland ee Hargeysa,ciidamada ammaanka ayaana la soo dhoobey jidadka waa weyn ee dhex qaada Hargeysa waxaan ay halka ka wadaan baaritaan.
Gawaarida iyo dadka shacabka ah ayaa la baarayey,waxaana la sheegay ciidanku inay sugayaan amniga Hargeysa.
XOG:- Khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha oo wali taagan iyo Xog ku aadan Wasiirada la isku heesto.
Xildhibaanada Diyaarinaya Mooshinka Madaxweynaha Soomaaliya lagu ridayo oo sii kordhay (Warbixin Xasaasi ah)
‘’ Waxaan wali wadnaa diyaarinta mooshin lagu ridayo MadaxweynahaSoomaaliya maadaama uu kabiyo diiday in uu qaato bayaankii aan uga codsany in uu is casilo , Xildhibaanada ku baaqay in uu is casilo Madaxaweynaha in ay sii kordhaan maahanee majirto in ay yaraanyaaan’’ ayuu yiri Xildhibaan la hadlay Shabakada Alldhacdo.com.
Xildhibaanada hada kusoo biray Xubnihii horey bayaanka u soo saaray ayaa la sheegay in ay ka caroodeen Maamul xumada dalka ka jirta iyo amaanka oo faraha kasii baxay kadib markii weerar dharaar cad Al-Shabaab ku galeen xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho.
Aqriso Magacyada Sadax Nin oo Al-Shabaab ku toogteen Fagaare kuyaala Gobolka Shabeelaha Hoose.
Xarakada Al-Shabaab ayaa shalay galinkii dambe waxa ay xukun dil ah ku fuliyeen sadax nin ay ku eedeeyeen in ay ahaayeen Jawasiis la shaqeysa dowlada Federaaka Soomaaliya iyo Dowlado kale oo gacan siiya Dowlada.
Xukunka dilka ah ee lagu fuliyay sadaxdan nin ee Al-Shabaab jaajuusnimada ku eedeeyeen ayaa shalay galab ka dhacay fagaare kuyaala Deegaanka Buulo Mareer ee Gobolka Sh/Hoose ,waxaana soo xaadiray goobta dilku ka dhacayay Masuuliyiin katirsan Al-Shabaab iyo shacab aad u badan.
Qaadiga Maxkmada Al-Shabaab ee Gobolka Sh/Hoose ayaa sheegay in Sadaxda nin ay ahaayeen jawaasiis iyo kuwa u shaqeeya Dowlada , Waxaana ku jira Sadaxda nin ay dileen nin ka yimid deegaanada Soomaalida Itoobiya .
1-Cali isxaaq cabdi oo 24 sano jir ahayaa lagu eedeeyay in uu kamid ahaa Ciidamada NabadSugida dowladda Federaalka islamarkaana uu dhowr qof oo Al-Shabaab katirsan gacan geliyay
2-cusmaan Mahdi Cusmaan oo 33 sana jir ah ayaa isna Shabaab ku eedeeyeen in uu musharax u ahaa gudoomiye ku xigeenka Degmada qoryooley isagoona laqabtay xili maeelshiyaad si hoose u aruursanay si uu sheegay qaadiga Al-Shabaab.
3-Bareele macalin C/Raxmaan oo 31 sano jir ah waxaa lagu eedeeyay fal jaasuusnimo isagoona ka yimid dhanka dhulka soomaaligalbeed Itoobiya waxa ayna Shabaab ku sheegeen in ninkan uu xubina ka ahaa ciidanka Liyuu Booliska.
Al-Shabaab ayaa marar kala duwan xukuno dil ah waxa ay ku fuliyeen dad ay ku eedeeyeen in ay jawaasiis yihiin una shaqeeyaan Dowlada Soomaaliya iyo Dowlado shisheeye oo gacan saar la leh Dowlada Federaalka.
DAAWO:- Jaaliyadda Soomaalida Uk oo madaxa iskula jirta, is-qab qabsi soo cusboonaaday.
Waayadii danbe waxaa soo shaac baxayay, inuu Khilaaf xoogan soo kala dhex galay Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka UK.
Waxaa jira 2 nin oo mid walbo uu sheeganayo inuu yahay Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaaliyeed ee UK.
Khilaafkan soo kala dhex galay Jaliyada, ayaa saameyn xoogan ku yeeshay Jaaliyada, iyadoo aysan jirin isku duubnaan, isku xirnaan, taasna ay sababtay inuusan jirin shaqsi u dooda dhibaatooyinka soo wajaha Soomaalida ku nool UK.
TOP NEWS:- C/weli Gaas oo xaaladda ku xuntahay, dhaliil loo haayo siyaasadiisa!
Golaha Difaaca ee Maamulka Puntland ayaa dhaliilay Siyaasada Madaxweynaha Maamulka Puntland Cabdi wali Gaas kadib markii sida ay sheegeen uu fulin wayay balan qaadyadii uu balan qaaday xiligii olalaha doorashooyinka Puntland.
Waxa ay sheegeen gudigaa in Madaxweyne Gaas waxyaabo badan oo laga sugayay in uu qabto uusan qaban sidaa daraadeed ayay sheegeen in ay ku dhaliilayaan waxa ayna ka digeen in Puntland aan la buru burin oo laga taliyo aayaha Puntland.
Gudigaa oo ah Gudi iskiis isku abaabulay ayaa xusay in Madaxweyne Gaas siyaasada Puntland ku hugaamiyo tahay mid fashil ah oo aan dad iyo dal midna lagu hugaamin karin waxa ayna aad uga soo horjeesteen qaabka ula macaamilo Xukuumada Soomaaliya.
Gudigaa ayaa soo qaatay Shirar kala duwan oo dhacay muda ku dhawaad shan bilood ah kuwaas oo gudiga sheegen in ay dhaliilsan yahiin waxa ayna dhacdooyinkaa oo dhan eedeeda dusha u saareen Madaxweynaha Puntland Cabdi wali Gaas.
Gudiga ayaa sheegay in Xukuumada uu hugaamiyo Gaas waxyaabah ay ku fashilantay qayb ka yahay amniga waxa ayna tusaale u soo qaateen dilkii Sargaal ka tirsan Madaxtooyada Bosaaso uu dilay mid ka mid ah ilaalada Madaxtooyada Bosaaso.
Garoomada kubada cagta oo mudooyinkii ugu dambeeyey ku soo bateen arin mucjiso iyo la yaab leh!!(Daawo Muuqaal+Wabixin)
Garoomada kubada cagta aduunka ayaa waxaa la sheegay in mudooyinkii ugu dambeeyey ay ku soo bateen arin mucjiso iyo la yaab leh ka dib markii si caadi ah loogu arkay oo ayna kaamiradu si toos ah ay u qabatey Jini ku sugan garoomadaas arintaas oo yaab iyo amakaag ku reebtay qaar badan oo ka mid ah dadka aduunka.
Garoomada kubada cagta ee ku kala yaala wadamada Jarmalka iyo Bolivia ayaa waxaa la sheegay in mudo bil gudahooda ah lagu arkey wax lagu sheegay inay yihiin Jini oo garoomadaas soo xaadirey , Jinigaan ayaa markii ugu dambeysay waxaa uu ka soo muuqday ciyaartii fiinaalka ee koobka Jeneraal daa’uudka dalka Jarmalka ee dhawaantaan dhexmartey kooxaha kala ah Bayern München iyo Borussia Dortmund, xilligii lagu gudo jirey ciyaartaas ayaa waxaa ka soo muuqday kaamirada oo ay qabatey reer aakhiraad ku dhex jira garoonka iyadoona markii dambe uu goobtaas ka baxsaday, Sidoo kale ayaa waxaa kol hore lagu dhex arkay garoon ku yaala dalka Bolivia oo ay ka socotey ciyaar ka tirsanayd koobka Copa Libertadores (oo ah mid la mid ah Champions League wadamada ku yaala South America) oo u dhexaysay kooxaha kala ah Defensor Sporting iyo kooxda The Strongest ayaa waxaa mar qura goraankaas lagu arkay oo ay kaamiraduna ay qabtey hoos madoow oo dhex ordaaya tarbuunka ay fadhiyeen taageerayaasha kooxdaas, Hooskaas ayaa waxaa uu u muuqday mid ku dul ordaaya dadkii daawanaayey ciyaartaas.
Ugu dambeyntiina iyadoo waxyaabahaas mucjisada ah ee lagu arkay garoomadaas ay yaab iyo amakaag ay ku noqotey qaar badan oo ka mid ah dadka aduunka ayaa waxaa jira inay dadka qaar ay ka muujiyeen shaki waxaa ay indhahoodu ay qabteen oo ay ku sheegeen inaysan aaminsaneyn, Laakiin qaar kale oo ka mid ah dadka aduunka ayaa waxay shegeen inay si cad ay ugu muuqata muuqaaladaan mucjisada ah oo aanan la dafiri karin, Laakiin si kastaba arintu ha ahaatee waxaan shaki ku jirin inay muuqaaladaas ay muujinayaan waxyaabo aan caadi ahayn oo ka soo muuqday garoomadaas lagu ciyaaraayey kubada cagta .
Weerarkii xarunta BF oo muujiyey wax badan oo dadka aysan ka ogeyn DFS.
Weerarkii Alshabaab ee ay dhawaan ku soo beegsadeen Xarunta Barlamaanka Federalka ayaa lala jahwareeray xeelladaha ay ku soo gaareen Xayndaabka Madasha Barlamaanka oo la og yahay inay Ciiddamo badan ku hareeraysan yihiin.
Qaabka ay Dagaalyahannadda uga soo dhex duseen Ciiddanka Dowladda ayaa lagu micneeyey Aragtiyo badan, waxayna hadal-haynta ugu badan tahay in ay jiraan Ilo u fududeeyey Hawlgalkooda iyo inay soo agaasintaan gaadiidkooda xambaarsanaa waxyaabaha qarxa.
Xeellad kasta iyo xoog kasta oo ay Alshabaab ku soo duullaan tagaan ayaa noqotay mid ay Madaxda Dowladda iyo Hay’adda Ammaanka ku soo baraarugaan, isla markaana uu abuurmo guux-siyaasadeed, khalkhal nabadgeliyo, eedeyn iyo in Mas’uul kasta uu ra’yigiisa ka dhiibo.
Beesha Caalamka ayaa iyagana u kala harin inay si keli-keli iyo si wadar ahaan u cambaareeyaan Weerarkii Alshabaab ee Barlamaanka Federalka, waxayna Dowladda Federalka u muujiyeen inay la garab taagan yihiin Taggeero baahsan.
Yabooh kasta oo ay Beesha Caalamka u fidiyaan Dowladda Federalka waxaa daba socda dhaliil iyo inay saluug ka muujiyaan qaabka loo maamulay Kaalmooyinka Dhaqaalaha iyo kuwo Milliteriga.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu mar khatar u galay inay Alshabaab ku khaarijiyaan Villa Somalia ayaa weerarkii Barlamaanka kadib sheegay in Isbedel lagu samayn doono Hay’adaha Ammaanka, laakiin weli ma muuqdaan Taabagelinta hadalkii Madaxweynaha.
Is-casilaaddii Wasiirkii Amniga Qaranka, C/kariim Xuseen Guuleed ee Qarixii Barlamaanka kadib ayaa isagana dhaliyey su’aal-siyaasadeed ku aadan sababaha rasmiga ee uu isku casilay, iyadoo la og yahay inuu labo jeer Wasiir ka soo noqday labadii Xukuumadood ee ugu dambeeyey.
Xeeldheerayaasha docda wanaagsan wax ka saadaaliya ayaa la dhacsan go’aanka C/kariim Xuseen Guuleed, iyagoo ku tilmaamay inuu yahay Siyaasigii ugu horreeyey ee is-casila, kadib, markii uu fashil baahsan ku soo faruurmeen.
Laakiin, Aqoonyahannadda sida gaarka u naqdiya Siyaasadda iyo Maamulka Xukuumadda haatan dhisan ayaa rumeysan inuu jiro Fashil Guud oo wada saameeyey Ra’isul-wasaare C/weli, Golihiisa Wasiiradda iyo Taliyayaasha Hay’addaha Ammaanka Gudaha oo iyagu aan wax waayo-aragnimo ka kororsanin Xeelladaha iyo weeraraddii Alshabaab ee uu dhiigga badan ku daatay.
Waayo-aragnimo la’aanta laga dhaxlay casharadda weeraradda iyo is-qarxinta ee Alshabaab ayaa horseedi karta inay si joogto ah u dhacaan meertooyinka weeraradda iyo is-qarxinta wada socota.
Hay’addaha Ammaanka ee Dowladda ayaa iyagana lagu dhaliilaa inay ku soo baraarugaan marka ay dhacaan Weeraradda Alshabaab, waxayna bilbaabaan inay hubkooda sidii bandhig oo kale Waddooyinka la keeb yururaan, iyo inay baaritaanno aan kala sooc lahayn kula dhaqaaqaan dadka iyo gaadiidka.
Sidoo kale, Bulsho-weynta ayaa su’aallo ka keenay hab-dhaqankaasi, waxayna Magaallo-joogii hore dhacdadan soo noqnoqotay ku soo koobeen fal la mid ah qaabkii ay ka daawan jireen Filimaddii Cow boy-ga.
Dhinaca kale, Mas’uuliyiinta Dowladda (Rayid iyo Ciiddanba) waxay Weerradda Alshabaab kadib dhaqan ka dhigteen inay is-eedeeyaan iyo in khilaaf iyo kalsooni-darro abuuranto Hal-qabsina laga dhigto Isbedel iyo Isku-dhaandheyn baa lagu samaynaa Hay’addaha Fulinta iyo kuwa Amniga.
Si kastaba ha ahaatee, weerar kasta oo ay Dagaalyahannadda Alshabaab ku soo qaadaan Farriisimadda Dowladda kadib , waxaad Madaxda Dowladda ka filan kartaa cambaarayn, Fadhiyo degdeg ah iyo in lagu dhawaaqo Isbedel dhinaca Amniga, balse aan ficil lahayn.
DF oo ciidankii ugu badnaa soo wada si loo helo amaan buuxa.
Taliyaha Hay’adda Sirdoonka Somalia General Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe), ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in maalmaha soo socdo, ay Ciidan lixaad leh oo ka tirsan Nabad Suggida ku soo wajahan yihiin Magaalada Muqdisho.
Taliyaha, ayaa wuxuu sheegay in Ciidamada Nabad Suggida ka tirsan ay ka soo laabanayaan dalka dibaddiisa, halkaasoo uu tilmaamay in ay tababaro ku soo dhameysteen.
Ma sheegin dalka ay ka soo laabanayaan Ciidamada cusub, iyadoo dhinaca kalana uu sheegay in Ciidamadaan ay in badan ka badan yihiin kuwa kale ee iminka dalka ka hawlgala.
Sidoo kale wuxuu sheegay in ay la dagaalami doonaan oo ay Caasimada ka sifayn doonaan mintidiinta Shabaabka, kadib markii uu ku eedeeyay in ay shaki gelinayaan xasiloonida Caasimada, sida uu yiri.
General Bashiir Maxamed Jaamac waxa uu tibaaxay dhalinyaradaan in ay yihiin kuwo gurxan oo fir fircoon, isla-markaana ay la imaan doonaan isbedel weyn oo ku aadan xagga ammaanka.
Sarkaalka ugu sareeya Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya, ayaa maanta wuxuu sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya iyo Wasaarada Arrimaha Gudaha, uu ka balanqaadaayo in isbedel muuqdo ay Ciidamada cusub ku soo dabaali doonaan Magaalada Muqdisho.
General Bashiir Goobe, ayaa ku soo cel celiyay Ciidamadaan in Magaalada Muqdisho ku imaan doonaan muddo toddobaad ah amaba toddobaadyada kale ee xigga, lana dareemi doono tiradooda.
Hadalkaan, ayuu ka sheegay Munaasabad maanta ka dhacday School Polizio (General Kahiye), oo tababar uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu soo xiray, Maamulo loo tababaray in ay ka hawlgalaan ilaa 25 Degmo, oo qaarkood ay gacanta ku hayaan Shabaab. Waxayna ka hawlgali doonaan marka laga saaro Al-Qaacidada Soomaaliya.
XOG HOOSE:- Khilaafkii u dhaxeeyay Xasan Sheekh & Ra’iisul wasaarihiisa oo cirka isku shareeray iyo IGAD oo la safatay…
Warar hoose oo aynu ka heleyno Villa Somalia ayaa sheegaya inay muran siyaasadeed soo kala dhex galay madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’iisul wasaare C/weli Sheekh uu jiro.
Wararka ayaa sheegaya in dhanka awoodda la isku qabtay isla markaana xildhibaanno Hawiye iyo Daarood khilaafaadka taagan ay ka qeyb noqdeen.
Ilo-wareedyo soo baxaya ayaa sheegaya in beesha caalamka ay taageertay Ra’iisul wasaare C/weli Sheekh Axmed.
Wasiirada Damu-jadiid ee madaxweynaha ku fikirka ah ayaa kamid ah kuwa la isku khilkaafsan yahay.
IGAD iyo beesha caalamka ayaa amray in Xasan Sheekh oo ah madaxweynaha dowladda Federaalka uu joojiyo awoodda uu sida aan cadaiga ahayn u isticmaalayo.
IGAD waxaa ay amartay in Xasan uu ku wareejiyo awoodda inteeda badan Ra’iisul wasaaraha dalka Dr. C/weli SHeekh Axmed.
Maalmihii dambe waxaa soo baxayay eedo Ra’iisul wasaare C/weli uga imaanayay qaar kamid ah xildhibaanada iyo siyaasiyiin ku eedeynayay inuu qalalaase ku lug leeyahay.
Hase yeeshee, beesha Daarood ayaa inta badan taageero weyn u heysa Ra’iisul wasaaraha inkastoo beelaha qaar ay tabanayaan in ra’iisul wasaaraha uusan qaban wixii loo igmaday.
DAAWO WAREYSI XIISO LEH:- Sheekh Kenyaawi muxuu kala kulmay dalalka Holland & Norwey?
Dad badan oo xabsiga Kismaayo la dhigay ka dib markii lagu eedeeyay in ay..
Mahad Cali Salaad oo ah taliyaha ilaalada waddooyinka magaalada Kismaayo ee maamulka KMG ee Jubba ayaa sheegay inay wadaan howlgallo ay kula dagaalamayaan dadka ka soo hor-jeeda bilicda magaalada Kismaayo.
Taliyaha ayaa sheegay in 12 qof ay xir-xireen ciidamada kadib markii lagu qabtay iyagoo qashin ku daadinaya waddooyinka magaalada Kismaayo, gaar ahaan wadada Somali Star ee magaalda Kismaayo.
Ciidamada ilaalada waddooyinka ee maamulka degmada Kismaayo ayaa waddooyinka waa weyn ee magaaladaasi lagu arkayaa iyagoo gaaf-wareegaya magaalada Kismaayo si ay uga qeyb qaataan baabuur.
Taliyaha ayaa dadweynaha ku nool Kismaayo faray in dadka shacabka ah ay qashinka u dhiibaan baabuurta maamulka uu ugu tala-galay.
Qof walba ayuu sheegay in masuuliyadi ay ka saaran tahay bilicda iyo nadaafadda magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada Hoose.